Ukubala njani inani leepaneli zelanga endizifunayo? | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ungalibala njani inani leepaneli zelanga endizifunayo?
UTomàs Bigordà | | Photovoltaic Solar Amandla
Amaxesha amaninzi xa sicinga ukubeka iiphaneli zelanga Nasiphi na isakhiwo, sijonga inani elipheleleyo ekufuneka silibekile kuloo ndawo. Ngesi sizathu, ngeli nqaku, siya kuzama ukukucacisela kwelinye indlela ecacileyo nelula yokubala eli nani ukuze kube lula kuwe xa ufaka. Le ndlela, ngokwenxalenye yayo, inokusetyenziselwa indlu kunye nolunye uhlobo lwepropathi apho kufuneka isixa esithile samandla esiya kuthi sifikelele kwezi paneli zelanga.
Okokuqala, kufuneka uyazi ukuba iipaneli zelanga inokubekwa zombini kuthotho okanye ngokudibeneyo. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo, kodwa kufuneka sihlalutye amandla aveliswa yiphaneli yelanga kwaye ngoku ikakhulu, sinokubala inani lilonke leephaneli zelanga okanye ze-photovoltaic esizifunayo.
Ewe, ungaze ulibale khetha iphaneli yelanga ekumgangatho ophezulu, kuba olu hlobo luya kuhlala luvelisa amandla amaninzi kwaye ukuba unayo nayiphi na ingxaki kulula ukuba baphendule, kuya kufuneka ugcine engqondweni Qaphela ukuba wenza ufakelo ubuncinci iminyaka engama-25.
1 Iiphaneli zelanga: ufakelo oluya lusetyenziswa nangaluphi na uhlobo lwasekhaya
2 Iipaneli zelanga zinegalelo ekunyamekeleni indalo kunye nezinto eziphilayo
Iiphaneli zelanga: ufakelo oluya lusetyenziswa nangaluphi na uhlobo lwasekhaya
Ke ngoko, ukubala amandla aveliswa yiphaneli yelanga ngosuku olunye kufuneka sisebenzise le fomyula ilandelayo. Kule meko, amandla epaneli ewonke ziziphumo zephaneli ephezulu yamaxesha okwangoku ombane wamandla aphezulu ngeyure yencopho yelanga kunye ne-0,9 eyi-coefficient yokusebenza kwepaneli. Ke ngoko, ifomula yile: Elenjongo = Ndilenjongo Vlenjongo IHSP 0,9 [Whd]
Kwelinye icala, kufuneka sazi amandla aveliswa yiphaneli yelanga enye. Kule meko, ikwabalwa ngendlela elula kakhulu. Ifomula imi ngolu hlobo lulandelayo:
EUmvelisi wefotovoltaic = Igenerator-photovoltaic · I-Vgenerator-photovoltaic · HSP · 0,9
Kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba la ngamandla aveliswayo yimodyuli enye yelanga, kodwa ukuba eyona nto ufuna ukuyazi kukuba ingakanani amandla ukufakelwa kwelanga (okuneepaneli ezininzi zelanga) kuya kuba nakho ukuvelisa, ifomula eyahlukileyo. Kule meko, okwangoku sisiphumo sobumbano lweemodyuli ze-photovoltaic ezidityaniswe ngokufanayo ngelixa ombane Ifunyenwe kwisambuku sayo yonke imithamo yecandelo ngalinye elidityaniswe kuthotho.
Ukulandela ezi fomyula zichazwe apha ngasentla, uya kuba nakho ukwazi ngendlela Kulula kakhulu inani leepaneli zelanga oyifunayo kokubini ekhayeni lakho nakwezinye izakhiwo okanye izakhiwo.
Okokugqibela, ungalibali ukuthathela ingqalelo ubungakanani bezi zinto, kuba oku kubalulekile unikezele ngesiqinisekiso esipheleleyo semfuno yamandla esinayo ngamaxesha onke, ukongeza koko sinokuyisebenzisa ukunciphisa iindleko zezoqoqosho ngokuxhomekeke kuhlobo lwethu lofakelo.
Iipaneli zelanga zinegalelo ekunyamekeleni indalo kunye nezinto eziphilayo
Ndiyabulela kwizibonelelo ezinkulu eziveliswe lolu hlobo lofakelo, ngakumbi nangakumbi iinkampani zokwakha namhlanje zikhethe ukusebenzisa olu hlobo lofakelo, oluluncedo kakhulu kwindalo nakwiplanethi yethu.
Ngapha koko, umzi mveliso welanga we-photovoltaic unesizathu sokwaneliseka emva kwerekhodi lowama-2015, apho amandla afakiweyo wamandla e-photovoltaic afikelela kwi-229 gigawatts (GW). Ngo-2015 kuphela, kwafakwa i-50 GW, kunye nombutho wabaqeshi baseYurophu Amandla eSolarPower eYurophu Uqikelela irekhodi le-2016, apho kuya kufakwa ngaphezulu kwe-60 GW.
Kwimeko yokungabikho kolwazi olusemthethweni, ingxelo iqikelela oko ngo-2016 i-62 GW iyakufakelwa kwihlabathi liphela yamandla amatsha. Ngelishwa kuthi uninzi lwezi fakelo zintsha zikwiimarike zaseAsia. I-China iya kuphinda ibe ngamandla okunyusa amandla, kuba kuphela kwisiqingatha sokuqala sonyaka ifake i-20 GW yamandla amatsha.
Uqikelelo lweSolarPower eYurophu luhambelana nezo zichazwe ngu Umanyano lweNtengiso ye-PV, uqikelelo lwentengiso yelanga yelizwe ngo-2016 nango-2017, oqikelele ukuba ngaphezulu kwe-60 GW iyakufakwa kulo nyaka nangaphezulu kwama-70 GW ngo-2017. Kuzo zombini ezi meko uqikelelo alunathemba kakhulu kunaleyo iqikelelwe Inkunzi yeMercom y Uphando lwe-GTM, Baxela kwangaphambili i-66,7 GW kunye ne-66 GW, ngokwahlukeneyo, kulo nyaka.
Ngelishwa, iYurophu ayizukubhalisa imeko efanayo, kodwa ngokuchaseneyo. Ngaphandle kwento yokuba lo mmandla waba ngowokuqala emhlabeni ukoyisa isithintelo se-100 GW ye-photovoltaic efakiweyo, kunye ne-8,2 GW epheleleyo ye-photovoltaic efakwe kwilizwekazi elidala, iSolarPower Yurophu ilindele ukuba ibango lehle ngeminyaka ye-2016 kunye ne-2017 .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Ungalibala njani inani leepaneli zelanga endizifunayo?
ICESAREO GUSTAVO QUINTOS CASTELAN sitsho
KUBALULEKE KAKHULU UKUFAKA ISICELO SETHEKHINOLOJI NGOKUPHELELEYO KWEZINDLU KUNYE NOKUQHUBA IZINDLU EZINTSHA NE-SOLAR TECHNOLOGY NJENGOKO KUFUNEKA ISISEKO SOKUQALA
Phendula CESAREO GUSTAVO QUINTOS CASTELAN
Irobhothi entsha ingena kwi-Fukushima reactor 1
Yenza i-biogas evela kwinkunkuma yeetapile